Yiziphi izindlela ezitholakala zokuthola i-backlink ngonyaka ozayo?
Wonke umuntu osebenza emakethe yedijithali uyazi ukuthi ukwakha isixhumanisi kubalulekile empumelelweni uma kuziwa ekukhuliseni igunya lewebhusayithi nokuthola isikhundla esiphakeme ku-SERP. Uma ungathanda isikhundla esiphakeme ku-SERP, udinga ama-backlink amaningi. Ikhwalithi yakho nokuqukethwe okuhlelwe kahle ngeke kubonwe ngabafundi bakho abangahle uma bengenayo izixhumanisi. Ngakho, izinga lokubuyisela emuva kwekhwalithi lenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekuthuthukiseni injini yokusesha namuhla. Zonke izihloko ezisezingeni eliphezulu kanye nokuthunyelwe kunamathani ezinhlobonhlobo ezivela eminye imithombo yekhwalithi ekhomba kubo. Izixhumanisi zisebenza ngamavoti wamakhasi ama-Google abheka njengokugunyazwa. I-Google ibheka amakhasi anezinkulungwane zezixhumanisi njengento ehlonishwa kakhulu kunekhasi elinama-backlink ayishumi. Kodwa-ke, uma lezi zixhumanisi zivela emithonjeni ye-intanethi eyaziwayo, izobiza izinkulungwane ezingxenyeni zangaphakathi zekhwalithi zangaphandle.
Siphila ezweni lapho wonke amabhizinisi adinga khona ama-backlink. Abadayisi bawafuna nsuku zonke, futhi kuba nzima kakhulu ukuhlala phezulu kulo mdlalo. Abathengisi abaningi bayeke ukumisa imikhankaso yabo yokwakhiwa kokuxhumana njengoba beyithokozela, ingenangqondo futhi ingenandaba. Nokho, akuyona indlela yokuphuma. Ukuze ukwandise ithrafikhi ephilayo, udinga ukwakha iphrofayli ye-backlink ikhwalithi. Ngakho-ke, ukuthola ama-backlink ngo-2017, 2018 nayo yonke iminyaka elandelayo kuyoba yinto ebaluleke kakhulu. Kunezinye izindlela ezingaguquki ongazisebenzisa emkhankasweni wokwakha isixhumanisi ukuze uthole umphumela obonakalayo. Kulesi sihloko, sizocubungula lezi zindlela kanye namathiphu omkhankaso wokwakha izixhumanisi ezisasebenza ngo-2018.
Indlela yokuthola i-backlink ngo-2018?
Ukubhulolwa kwabamemezeli kuyithuba elihle kakhulu lokushayela ithrafikhi entsha neqondisiwe kusayithi lakho. Kuyindlela eqondene neyethi efanele yokwakha ijusi yokuxhumanisa kwekhwalithi. Ngaphezu kwalokho, kukunika ithuba lokuzibiza njengomchwepheshe wezimboni futhi ubonise abasebenzisi igunya lakho.
Indlela ephelele yokusetha izimpendulo zangaphakathi ukwakha ibhulogi yesayithi lakho. Kodwa-ke, ukuthunyelwa kumasayithi evakashele asevele anesiphathimandla esiphakeme kanye nedumela elihle phakathi kwabasebenzisi abadweba ithrafikhi noma ngabe awukwazi ukufinyelela. Kuzo zonke izivakashi zokuthunyelwe ezilodwa, kuzomele usebenzise umdwebo obhaliwe wabalobi obubuyisela kusayithi lakho. Izokusebenzela njengokukhuthazwa kwamahhala nokuthuthukisa igunya lakho lomkhiqizo. Ubhala isihloko esikhulu esekelwe ocwaningweni futhi njengokushintshaniswa komsebenzi wakho owamukela i-backlink eyigugu. Konke kubonakala kulungile, akunjalo? Ngakho-ke, inhloso eyinhloko lapha kuphela ukuthunyelwa kwezivakashi kumasayithi aphezulu, aphezulu. Ngiyeluleka ukuthi ungachithi ukudala izihloko zewebhusayithi engafanele ye-spammy website.
Bhekisela kubathonya ekuthunyelwe kwakho
Ngingaphezu kokuqiniseka ukuthi ubhekene nezihloko ezihlobene abantu abanegunya eliphezulu kanye nabathonya bakho be-niche. Bahlanganyela bese benza abasebenzisi bachofoze kubo. Ama-athikili anjalo athola ngokuvelele esikhathini esifushane njengoba abamba futhi aqukethe olunye ulwazi olusekelwe ocwaningweni. Labo abashicilela izihloko ezinjalo benza kanjalo ngesizathu esiqondile. Bangathanda ukuthola ama-backlink aphezulu ngaphezulu ngokusebenzisa lezi zihloko. Ngakho-ke, uma usho abantu abadumile ezihlokweni zakho, cishe uzothola izixhumanisi ezihlosiwe ezingaphezulu kuwebhusayithi yakho. Okunye okunye okuwukuthi ingcindezi yengqondo oyishoyo ingabelana ngalezi zihloko nabalandeli babo abaningi Source .